Oracle inovhara yekutsvaga uye yekuvandudza nzvimbo muChina | Linux Vakapindwa muropa
Imwe Chinese bhizinesi portal yakashuma nhau dzekudzingwa.
Maererano ne nhepfenyuro kubva munyika iyoyo, Oracle ichavhara nzvimbo yekutsvagisa nekusimudzira muChina. Izvi, zvakawedzerwa kune zvimwe zvikamu, zvichakonzera kudzingwa kwevanhu vanopfuura mazana mapfumbamwe. Chinyorwa chinodudza Oracle director wevashandi veAsia nePacific sosi. Kunyangwe zvakadaro hapana kana mumwe kubva kukambani akaburitsa nezvenyaya iyi.
Ruzivo urwu runogona kusimbiswa nevamwe veChinese vezvenhau avo vaikwanisa kutaura nevashandi veOracle uye nevanhu vanoziva mamiriro ezvinhu. Pakati peavo vakakanganiswa nekubviswa mabasa, Mazana mashanu anobva kuOracle's R & D nzvimbo muBeijing. Izvi zvakaenzana kungodarika makumi matatu% evashandi vakazvipira kutsvagisa iyo kambani iri munyika yeAsia. Hazvizivikanwe kuti chikamu chimwe chinowirirana necheni ipi.
The company vakapa chirongwa chekuzvidira pamudyandigere chakaenzana nemishavha mitanhatu pagore yakashanda kune avo vanobvuma kusiya basa pamberi paMbudzi 22. Asi, maererano nemasocial network, chikumbiro hachiratidzike kunge chave kugamuchirwa zvakanaka neavo vakasiiwa basa. Zvakawanda Vashandi vakakanganiswa nehurongwa hwekusiya basa vaungana kuratidzira yekubviswa kweOracle kubva kuChina. Ivo vaishandisa masirogani senge "High purofiti, nei kuchine kuraswa?" kana "Siya zvematongerwo enyika kunze kwetekinoroji."
Dzimwe kudzingwa basa muUnited States
Zvisinei, rwisano yekutengeserana iri pakati peChina neUnited States, inoita kunge isiri iyo inokonzeresa dambudziko. Oracle inorongawo kuraswa muUnited States. Muna Kurume, yakazivisa kuti ichaburitsa vanhu vanopfuura mazana matatu kubva panzvimbo yayo yeUS R&D..
Panguva iyoyo, mutauriri akati:
"Bhizimusi redu regore parinokura, isu ticharamba tichienzanisa zviwanikwa zvedu uye nekugadzirisa boka redu rekuvandudza kuti tibatsire kuona kuti tine vanhu chaivo vekuendesa zvakanakisa gore zvigadzirwa kune vatengi vedu pasi rese."
Kambani yeAmerica yanga ichishanda muChina kwemakumi maviri emakore, ine mapazi gumi nemana, nzvimbo shanu dzeR&D uye ine vashandi vangangosvika zviuru zvishanu munyika. Chikamu chayo cheAsia Pacific chinomiririra zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvemari yekambani. Zvisinei, Mumusika unotongwa neAlibaba Cloud, Tencent Cloud, China Telecom neAWS, ichiri diki mutambi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Oracle inopisa 900 vanhu muChina. Kuratidzira kunoitika